Umatshini wokutywina oshushu womoya oshushu MAX-930T
Iinkcukacha zeMveliso: Iimpawu ze-1.Adopt PLC ekulula ukuyifunda, inkcazo ephezulu yokubonisa imisebenzi emininzi ebonisa isantya, ubushushu, ukusebenza kunye neprogram ngokucacileyo. Ulawulo lobushushu 2.Automatic, uzinzo eliphezulu, ubushushu ukuhla ± 1 ℃, uyilo eliphezulu alarm ubushushu, ukukhuselwa kumbhobho ubushushu. 3.Sebenzisa ukuhambisa uxinzelelo lwentambo ephezulu kunye nolusezantsi, imbuyekezo ngokuzenzekelayo indawo ebonakalayo, umsebenzi wokubaleka okuzenzekelayo, ukunciphisa uxinzelelo ...
I-Direct-drive efakwe kwi-Speed ​​Speed ​​Interlock Machine MAX-5150-CB / D.
Isicelo 1.Suit yelaphu obhityileyo, ukumodareyitha kunye elingqingqwa 2.Automatic isixhobo ukuthambisa ajikeleze yenza ukusebenza ezinzileyo egudileyo, kunye nezitishi ogqibeleleyo Technical Iparameters Model: MAX-5150-CB / D Inaliti: UY128GAS 9-14 # inaliti gauge: 4.0-4.8 5.6-6.4 Stitch length: 4.5 differential ratio: 0.6-1.3 Height of presser foot: 5.5mm Packing size: 580X380X620 (mm) Inaliti number: 3 Thread number: 4/5 Speed: 5000rpm NW / GW: 50/55 MAX-525BB Isantya esiphezulu se-Flat Bed Interlock yokuSula iMatshini MAX-616-UT-Z elawulwa yikhompyuter ...
Ukuqhuba ngokuthe ngqo okuhlanganisiweyo Isantya esiphakamileyo somatshini wokuThunga oMileyo MAX-7880-5D
Iimpawu 1. Intambo entsha kunye nomtya ophindwe kabini uvela. 2. Isixhobo se-silicone ye-HR kunye ne-booth rack ebuyela kwisixhobo seoyile. 3. Ukuphucula indawo yokutywina. 4. Underwears, izihlangu, izikipa, isilika imicu yemichiza njl.iiparameter zobuGcisa Model: MAX-7880-5D Inaliti: DCX27 9 # Inaliti inombolo: 2 Ukuphakama unyawo presser: 5.5mm Isantya: 7000rpm Ubungakanani bokupakisha: 470X330X480 (mm) I-NW / GW: 26.7 / 34.4 Inombolo yomtya: 5 inaliti yokulinganisa: 5 Stitch ubude: 0.5-3.8 Ububanzi bomthungo: 4 Umahluko womlinganiselo: 0.7-1.7 MAX-838-4DSY Di ...
Isantya esiphakamileyo somatshini wokuthunga nge-drive-MAX-979 ngqo
Isicelo sehempe, iblukhwe, iziketi, iisuti, ulusu, umqhaphu, idenim, uboya. Iimpawu: Uyilo lwamva nje kunye ne-MAX patent, umatshini usebenza ngokuzinzileyo; 2.Electronic ngomsonto uqinisa ukuqinisekisa othungayo ogqibeleleyo; Isilungisi se-3.Auto, isitishi esibuyela umva ngokuzenzekelayo, umqhubi weenyawo. I-MAX-3531D Isantya esiphezulu se-Direct-drive esonga umbane we-Lockstitch MAX-959-3DQ Isantya esiphakamileyo somatshini wokuthunga nge-Auto-trimmer MAX-383 Isantya esiphakamileyo somatshini wokuthunga
Isicelo sangaphantsi sabasetyhini esingenamthungo, ibhulukhwe yamadoda, iikawusi zamaqatha angenamthungo, iimpahla zokudada ezingenamthungo, ihempe yezemidlalo, ibhatyi yangaphandle, impahla yokuhamba ngebhayisikile, intente njalo njalo. Iimpawu ezifanelekileyo ukulungelelaniswa kwamalungu adibeneyo eengubo ezingenamthungo. Uxinzelelo kunye nexesha linokuhlengahlengiswa ukuze kufezekiswe owona mqobo ubalaseleyo weParameter yeVolthi: Amandla e-220V: Ubushushu be-2.5KV: 50-220O C Ukulibaziseka: 1-99 indawo yokuSebenza: 40 × 20 Uxinzelelo lokusebenza: 0.5Mp
Iimpawu zilungele ukudityaniswa kwezinto, isantya, uxinzelelo kunye nokuhamba rhoqo kunokuhlengahlengiswa ukufezekisa eyona mpembelelo intle. Isantya seParameter yobuGcisa: 0.5-10m / min Uxinzelelo lokusebenza: 0.5Mp
I-Ultrasound Fusion Edge Cutting Machine (ekhethekileyo yeZambatho zangaphantsi kunye neBra) MAX-C208
Isicelo Iindidi ezahlukeneyo zamalaphu efayibha yemichiza, iintlobo ngeentlobo zezikhumba, amalaphu angalukanga, umqhaphu otshiziweyo. Ifilimu ye-Thermoplastic, iphepha leplastiki, njl njl. Iimpawu ukongeza kuthotho lwe-20KHz ngokubanzi, sinokuvelisa uthotho lwe-15KHz ngamandla ukusuka ku-1000w ukuya ku-2500w ukujongana ne-PP, izinto ezithambileyo ze-PE, ubukhulu obukhulu kunye neziqwenga zomsebenzi omde ukuhlangabezana neemfuno zabathengi, Isetyenziswa kwishishini izinto zokudlala zeplastiki, elektroniki, izindlu ...
I-Ultrasound Rubber Edge Cutting Machine MAX-2602
Isicelo sangaphantsi sabasetyhini esingenamthungo, ibhulukhwe yamadoda, iikawusi zamaqatha angenamthungo, iimpahla zokudada ezingenamthungo, ihempe yezemidlalo, ibhatyi yangaphandle, impahla yokuhamba ngebhayisikile, intente njalo njalo. Iimpawu Zonke izihlandlo, isantya kunye noxinzelelo zilawulwa ngumbane, ukuchaneka nokuphindaphindwa kwenkqubo yokubopha, uninzi lwezinto ezishushu ezinyibilikayo, ilaphu elaminethiweyo, ilaphu, zinokusetyenziswa. Iparameters zeteknoloji I-Voltage: AC200-240V / 50-60Hz Amandla apheleleyo: 2000W Amandla e-Ultrasound: 850W i-Ultrasound frequency: 18-20K Isantya sokuqhubekeka: 0.5-10m / m ...
Umatshini we-Ultrasonic Bartacking MAX-2601
Isicelo sangaphantsi sabasetyhini esingenamthungo, ibhulukhwe yamadoda, iikawusi zamaqatha angenamthungo, iimpahla zokudada ezingenamthungo, ihempe yezemidlalo, ibhatyi yangaphandle, impahla yokuhamba ngebhayisikile, intente njalo njalo. Iimpawu ezifanelekileyo ukulungelelaniswa kwentloko edibeneyo, uxinzelelo kunye nexesha kunokulungiswa ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zezinto ezahlukeneyo. Isantya seParameter yobuGcisa: 0.5-10m / min Ububanzi bokusebenza: 1-10mm Ukusebenza rhoqo: 35KHz Uxinzelelo lokusebenza: 0.5Mp
Umatshini weBroadside Broads (ubuninzi be-6cm eNtsha) MAX-910-B1
Isicelo sangaphantsi sabasetyhini esingenamthungo, ibhulukhwe yamadoda, iikawusi zamaqatha angenamthungo, iimpahla zokudada ezingenamthungo, ihempe yezemidlalo, ibhatyi yangaphandle, impahla yokuhamba ngebhayisikile, intente njalo njalo. Iimpawu ezinamandla kunye nezisezantsi zeroller zilungelelanisa isantya ngokwahlukeneyo, imemori ye-10shrinkage memory ingagcinwa, uhlengahlengiso oluxhomekeke kubushushu betanki lobushushu, uxinzelelo lwe-roller luyahlengahlengiswa, ukugqitywa kwamalaphu nge-trimmer, ipaneli yokusebenza kwescreen, ukhetho oluninzi kwizinto ezahlukeneyo kunye nezixhobo zemveliso imfuneko. Indlela ...
Umatshini wokudibanisa weSilinda ongenamthungo MAX-920
Isicelo sangaphantsi sabasetyhini esingenamthungo, ibhulukhwe yamadoda, iikawusi zamaqatha angenamthungo, iimpahla zokudada ezingenamthungo, ihempe yezemidlalo, ibhatyi yangaphandle, impahla yokuhamba ngebhayisikile, intente njalo njalo. Iimpawu ezinamandla kunye nezisezantsi zeroller zilungelelanisa isantya ngokwahlukeneyo, imemori ye-10shrinkage memory ingagcinwa, uhlengahlengiso oluxhomekeke kubushushu beetanki, uxinzelelo lwe-roller luyahlengahlengiswa, ipaneli yokusebenza kwescreen, ukhetho oluninzi kwizinto ezahlukeneyo kunye nezixhobo zemfuno zemveliso. Iparameters zobuGcisa Voltage: AC 200-2 ...
Umatshini wokuLungisa uMatshini ongenanto
Ukusonga Ukusonga umsesane wendebe yebra. Iimpawu zeeseti ezi-3 zenkqubo yokufudumeza ezizimeleyo kunye nokusebenza komlomo kabini, ukuqinisekisa ukufudumeza imveliso ngokulinganayo, ulawulo oluzimeleyo lwethamo lomoya, uxinzelelo lwebhanti lunokuhlengahlengiswa. Ujongano lokuchukumisa lulula kwaye linomdla. Iparameters zobugcisa I-Voltage: AC 200-240V / 60Hz isantya sokondla: 0-10meter / ngomzuzu ububanzi beTire: 上 -Up12mm, 下 -Down20mm Power: 2000W Ubushushu: 0-300oC Uxinzelelo lokusebenza: 0.5Mpa